आफ्नै क्यारिकेचर हेरेपछि पूर्वयुवराज पारस शाह खुसीले गदगद, भरतमणीलाई यसो भने ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
आफ्नै क्यारिकेचर हेरेपछि पूर्वयुवराज पारस शाह खुसीले गदगद, भरतमणीलाई यसो भने !
ताप्लेजुङका भरतमणि पौडेलले कमेडी च्याम्पियनको गएको एपिसोडमा पूर्वयुवराज पारस शाहको क्यारिकेचर गरेपछि त्यसको अहिले कमेडी बजार तताएको छ ।
उनको प्रस्तुतीले निकै चर्चा बटुलेको छ र धेरैले उनै कमेडी च्याम्पियनको उपाधी उचाल्छन् भन्दैं दाबी नै गरिरहेका छन् । जो कमेडी च्याम्पियनमा आउनुअघि यस क्षेत्रमा आफूलाई चिनाउ संघर्षरत थिए । युट्युवमा उनका केही भिडियो पहिल्यै हिट भइसकेका थिए । यद्यपि, कमेडी च्याम्पियनको मञ्च पाएपछि उनको पहिचान रातारात उचाइमा पुगेको छ ।